Myanmar | J-Myanmar
Posts in category Myanmar
May 23, 2014 Golden Land Yangon, Myanmar
Apr 20, 2014 Myanmar 2012 – Monk life (2001)
Apr 17, 2014 Tokyo Myanmar Thingyan (2014)
Apr 16, 2014 Chan Chan (MTV EXIT Live in Myanmar)
Apr 11, 2014 Padauk Lett Saung
AEROSMITH တီး​ဝိုင်း​အကြောင်း တ​စေ့​တ​စောင်း
phyo, Jan 6, 2015
အချိန်​ကာလ​အား​ဖြင့် ၁​၉​၇​၀ ခု​နှစ်။ ဂစ်​တာ​သမား Joe Perry နဲ့ ဘေ့(စ်)ဂစ်​တာ​သမား Tom Hamilton တို့​နှစ်​ယောက်​ဟာ “Jam Band” လို့​အမည်ပေး​ထား​တဲ့ တီးဝ်ိုင်း​တစ်​ခု​ကို စတင်​ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ကြ​ပါ​တယ်။ ၁​၉​၇​၀ နှစ်​မ​ကုန်​ခင်​မှာ​ပဲ Vocalist ဖြစ်​တဲ့ Steven Tyler, Drummer Joey Kramer နဲ့ Guitarist Ray Tabano တို့​ဟာ အဆို​ပါ​တီး​ဝိုင်း​ထဲ​ကို ရောက်​ရှိ​လာ​ခဲ့​ကြ​ပြီး​တော့ Aerosmith တီး​ဝိုင်း​အဖြစ် ပြောင်းလဲ​လိုက်​ကြ​ပါ​တယ်။ Boston, Massachusetts United States က ပေါ်ပေါက်​လာ​ခဲ့​တဲ့ Aerosmith တီး​ဝိုင်း​ဟာ ဂီ​တသ​မား၊ အနု​ပညာ​သမား၊ စာ​နယ်​ဇင်း​သမား​တွေ အလွန်​ပေါများ​သော Hollywood နှင့် နီးစပ်​ရာ​သို့ …
“Lars Ulrich” ဆို​တာ​ကတော့ Welcome to Rock ‘n’ Roll က ဘော်​ဒါ​တွေ​ကို အထွေ​အထူး မိတ်​ဆက်​ပေး​စရာ မ​လို​တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်​တစ်​ယောက်​ပါ။ ဒ​ရမ်​တီး​ရ​တာ​ကို ဝါသနာ​ကြီး​တဲ့ လူ​ငယ်​အများ​အပြား​ရဲ့ အတု​ယူ လေးစား​အားကျ​ခံ​ရ​ခြင်း​ကို နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ ရ​ရှိ​ထား​တဲ့ ဒ​ရမ်​မာ​တစ်​ယောက်​ဆို​ရင်​လည်း မ​မှား​ပါ​ဘူး။ Lars Ulrich ကို ဒီဇင်ဘာ​လ ၂​၆ ရက်, ၁​၉​၆​၃ ခု​နှစ်။ Gentofte, Denmark မှာ မွေး​ဖွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။ Lars Ulrich ရဲ့​အဖေ Torben Ulrich ဟာ ၁​၉​၄​၀ နှောင်း​ပိုင်း​က​နေ ၁​၉​၈​၀ အစော​ပိုင်း​အထိ ကြေးစား​တင်း​နစ်​သမား တစ်​ယောက်​အဖြစ် လှုပ်ရှား​ခဲ့​ပါ​တယ်။ Torben Ulrich …
JIMI HENDRIX အကြောင်း တ​စေ့​တ​စောင်း
ဂစ်​တာ​လောက​မှာ “Hendrix Cord” ဆို​ပြီး အမည်တွင်​လောက်​အောင် Clustar Tone နှစ်​သံ​ပါ Cord တွေ​ကို မြိန်​ရေ​ယှက်​ရေ​ကြီး သုံးစွဲ​ခဲ့​သူ၊ Wes Montgomery နဲ့ Curtic Mayfield တို့​လို ဂစ်​တာ​ဘိုးအေ​တွေ​ကို အားကျ​ခဲ့​သ​လောက် လက်​ရှိ ဂစ်​တာ​အကျော်​အမော်​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ Joe Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, Yngwie Malsteen, Adrian Belew, Mechal Hedges အပါအဝင် ဂစ်​တာ​သမား​အများ​အပြား​တို့​အပေါ် ဩဇာ​လွှမ်းမိုး​ခဲ့​တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သူ​ဖန်တီး​ခဲ့​တဲ့ ဂီ​တ​က စိတ္တ​ဇ​ဆန်​သ​လောက် သူ့​ရဲ့​ဘဝ​က​လည်း ဒဏ္ဍာရီ​ဆန်⁠ဆန်​နဲ့ ဇာတ်​သိမ်း​သွား​ခဲ့​သ​လို 27 Club ရဲ့ အရေး​ပါ​ဆုံး​အဖွဲ့​ဝင် တစ်​ယောက်​လည်း ဖြစ်​ပါ​တယ်။ …
ဇော်​ဝင်း​ထွဋ် နှင့် သူ​၏​ဆရာ​များ
“ဂီ​တ​ကို ချစ်​မြတ်နိုး​တတ်​အောင်၊ ဂီ​တသ​မား​တွေ​ကို လေးစား​တတ်​အောင် လေ့ကျင့်​ပျိုးထောင်​ပေး​ခဲ့​တဲ့ လက်ဦး​ဆရာ​ကတော့ ဖေ⁠ဖေ​ပါ​ပဲ။ ဖေ⁠ဖေ​ရဲ ႔ သွန်သင်​ဆုံးမ​မှု​တွေ​ကို အခြေ​ခံ​ပြီး ဒီ​နယ်ပယ်​မှာ ရပ်​တည်​ခဲ့​ရ​တာ​ပါ။ ဒုတိယ​အနေ​နဲ့ ကျွန်တော့်​ကို သားသမီး​လို သဘောထား​ပြီး အနီး​ကပ် လေ့​လာ​သင်ကြား​ပေး​ခဲ့​တဲ့ ဆရာ​တွေ​ကတော့ ဦး​အောင်​မြင့် (လူ​ပျံတော် ပတ္တမြား) နဲ့ ဒေါ်​ဖြူ​သီ​ပါ​ပဲ။ တိုက်ရိုက်​သင်ကြား​ပေး​ခဲ့​တာ မဟုတ်​ပေ​မယ့် သူ​တို့​ရဲ့ အို​အေ​စစ် စ​တူ​ဒီ​ယို​မှာ နေ​ခွင့်၊ စက်​ပစ္စည်း​တွေ​ကို ကိုင်​ခွင့်​ပေး​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဆ​ရာကျော် (အင်​ဂျင်​နီ​ယာ) ဆီ​မှာ​လည်း အနီး​ကပ် လေ့​လာ​ခွင့် ရ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော့်​ရဲ့ ဂီ​တ​သင်​တန်း​ကျောင်း​ကတော့ အို​အေ​စစ်​လို့​ပဲ ပြော​ရ​မှာ​ပါ။ ဆယ်​နှစ်​လုံး​လုံး ဂီ​တ​သင်​တန်း​ကျောင်း​ကြီး တစ်​ကျောင်း တက်​ခဲ့​ရသ​လို​ပါ​ပဲ။ ဂစ်​တာ​တီး​လိုက်၊ အသံ​ဖမ်း​လိုက်၊ ဒ​ရမ်​တီး​လိုက်​နဲ့ …
ခေတ်​သစ်​မက်​တယ်​ဂီ​တ​ကို ဦးဆောင်​ခဲ့​တဲ့ ကောင်း​ဘွိုင်​များ
phyo, Jan 5, 2015
အချိန် – ၂​၀⁠၀​၆ ခု​နှစ် နေရာ – Rock am Ring Concert, Germany တ​ကိုယ်​လုံး​မှာ တက်​တူး​အပြည့်​နဲ့၊ ဦးထုပ်​ကို​နောက်ပြန်​ဆောင်း၊ မျက်မှန်​အမဲ​နဲ့ အဆိုတော်​ရဲ့​နာမည်​က M. Shadows ပေါ့။ မက်​တယ်​ဝိုင်း​ဖြစ်​တဲ့ Avenged Sevenfold တို့​ရဲ့​အဆိုတော်။ အားပါးတရ​အားပေး​နေ​တဲ့ ပရိတ်​သတ် (၁) သိန်း​ခွဲ​လောက်​ကို သူ​ဆို​မယ့်​သီချင်း​တ​ပုဒ်မ​စ​ခင်​မှာ ဟော​ဒီ​လို​ပြော​တယ်။ “မင်း​တို့​ကို လွန်​ခဲ့​တဲ့ (၁​၂) နှစ်​လောက်​ကို ပြန်ခေါ်​သွား​မယ်။ ဒီ​သီချင်း​ကို မ​သိ​တဲ့​ကောင်​တွေ အခု​ချက်ချင်း နာက်​ပြန်​လှည့်​ပြီး ဒီ​ပွဲ​ထဲ​က​နေထွက်​သွား။ Synyster အဲ​ဒီ​သီချင်း​ကို စ​တီး​လိုက်​ကွာ။” ပရိတ်​သတ် (၁) သိန်း​ခွဲ​လောက်​ကို အဲ​ဒီ​လို​ပြော​လိုက်​တာ​ဟာ ရုတ်​တရက်​ဆို ခင်​များ​လန့်​ချင်​လန့်​သွား​လိမ့်​မယ်။ သူ​ဆို​တဲ့​သီချင်း​နာမည်​နဲ့ ရာဇဝင်​ကို​သိ​ရင် …
ကို​ရီး​ယား တေး​အယ်လ်​ဘမ်​သစ် ထွက်​မယ့် ဘို​အာ
ကေ​ပေါ့ပ်​ဘုရင်​မ​ဘို​အာ သည် ၂​၀​၁​၅ အတွင်း ကို​ရီး​ယား တေး​အယ်လ်​ဘမ်​သစ်​ထွက်​ရှိ မည်​ဖြစ်​ကြောင်း ဘို​အာ​၏ အေ ဂျင်​စီ SM Entertainment က ကြေညာ​သည်။ အသက် (၂​၈)နှစ်​အရွယ်​ရှိ ကေ​ပေါ့ပ်​စ​တား ဘို​အာ​သည် ၂​၀⁠၀​၀ ပြည့်​နှစ် ဩဂုတ်​တွင် ID Peace B အယ်လ်​ဘမ်​ဖြင့် တေး ဂီ​တ​လောက​ကို စတင်​ခြေ​ချခဲ့​ပြီး ဂျပန်​နှင့် ကို​ရီး​ယား​နိုင်ငံ​တို့​၌ တေး အယ်လ်​ဘမ်​များ​စွာ ထွက်​ရှိ​ခဲ့​သည်။ ဘို​အာ​၏ နောက်ဆုံး​ထွက် ရှိ​သော ကို​ရီး​ယား​တေး​အယ်လ် ဘမ်​မှာ Only One ဖြစ်​သည်။ ယင်း​အယ်လ်​ဘမ်​သည် ၂​၀​၁​၂ တွင် ထွက်​ရှိ​ခဲ့​သည့် ဘို​အာ​၏ သတ္တမ​မြောက်​ကို​ရီး​ယား​တေး​အယ်လ် ဘမ်​ဖြစ်​သည်။ ဘို​အာ​သည် တောင်​ကို​ရီး …
အကယ်​ဒ​မီ​ပေး​ပွဲ​မှာ ရွှေ​ကြို​လုပ်​မယ့် အမ​ရာ​ငြိမ်း​ရဲ့ ရင်ခုန်​သံ
phyo, Dec 9, 2014
ထူးခြား​ခမ်းနား​စွာ ပြုလုပ်​ကျင်းပ​မယ့်​၂​၀​၁​၃ အကယ်​ဒ​မီ​ဆု​ေ​ပေး​ပွဲ​အတွက် ရွှေ​ကြို​အဖြစ် ရွေးချယ်​ခံထား​ရ​သူ​တွေ​အနက် အမ​ရာ​ငြိမ်း​ရဲ့ ရင်ခုန်​သံ​တစ်​ချို့​ကို မေးမြန်း​ကြည့်​လိုက်​တော့ “ခု​လို အပြောင်း​အလဲ​တွေ အများ​ကြီး​နဲ့ တွေ့​ရ​မဲ့ ၂​၀​၁​၃ အကယ်​ဒ​မီ​မှာ ပါဝင်​ခွင့်​ရ​တဲ့​တွက် အတိုင်း​မ​သိ ပျော်​ရွှင်​မိ​ပါ​တယ်။ မျှော်​လဲမျှော်​လင့်​မ​ထား​ပါ​ဘူး။ အရမ်း​လဲ ကျေနပ်​ပါ​တယ်။ ညီမ​ဖက်ကတော့ အတတ်​နိုင်​ဆုံး အကောင်း​ဆုံး​ဖြစ်​အောင် ကြိုးစား​သွား​မှာ​ပါ။ အဓိက ဒီ​နှစ်​ရွှေ​ကြို​မှာ ဝင်​လျှောက်​ဖြစ်​တာ​က ညီမ​သရုပ်ဆောင်​ဖက်​ကို ခြေ​ဦး​လှည့်​ချင်​လို့​ပါ။ အခု​ချိန်​လက်​ရှိ​မှာ မော်​ဒယ် တစ်​ယောက်​အနေ​နဲ့ လှုပ်ရှား​နေ​ပါ​တယ်။ အကယ်​ဒ​မီ​ရွှေ​ကြို​မှာ ပါဝင်​ခွင့်​ရ​တဲ့​တွက် သရုပ်ဆောင် လောက​မှာ လျှောက်​လှမ်း​ဖို့ အခွင့်အရေး​ရ​တယ်​လို့ မြင်​မိ​ပါ​တယ်။ ဝတ်​မှာ​က ကျောက်စိမ်း​ရောင်​ပါ။ ကို​လင်း​မြတ်​နဲ့​တွဲ​ပေး​ရ​မှာ​ပါ” လို့ သူမ​က ဆို​ပါ​တယ်။ Credit to Trend Myanmar
မူ​ပိုင်​ခွင့်​နဲ့ ပတ်သက်​ပြီး Digi Right ကုမ္မ​ဏီ​တည်ထောင်​လိုက်​တဲ့ ဟန်​ထူး​လွင်
Big Bag လို့ ပြော​လိုက်​ရင် မြန်မာ​နိုင်ငံ​ရဲ့ အထင်​ကရ Punk အဖွဲ့​ရယ်​လို့ အားလုံး သိ​ထား​ပြီး​သား​ပါ။ အဖွဲ့​ခေါင်းဆောင်​လို ဆို​နိုင်​တဲ့ ဟန်​ထူး​လွင်​ကို​တော့ အထူး​တ​လည် မိတ်​ဆက်​နေ​စရာ​မ​လို​တော့​ပါ​ဘူး။ ကဲ ဟန်​ထူး​လွင်​နဲ့ တွေ့​ဆုံ​ခိုက် ဘာ​တွေ​မေး​ဖြစ်​ခဲ့​သလဲ​ဆို​တော့ လတ်​တ​လော အနု​ပညာ​လှုပ်ရှား​မှု​က​နေ စ​ပြော​ပေး​ပါ​ဦး We are Big Bagရဲ့ Music Video ကို ရိုက်​ကူး​နေ​ပြီး ဂီ​တ​လောက​သား​တွေ မူ​ပိုင်​ခွင့်​နဲ့ ပတ်သက်​လို့ အကျိုး​ခံစား​ခွင့် အပြည့်​အဝ​ရ​ရှိ​အောင် လုပ်ဆောင်​ပေး​နေ​ပါ​တယ်။ လက်​ရှိ​မှာ Big Bag အတွက် သီချင်း​တွေ​ကို တစ်​နှစ်​လောက်​မ​ရေး​သေး​ပါ​ဘူး။ မူ​ပိုင်​ခွင့် နဲ့​ပတ်သက်​လို့ DIGI RIGHT ကုမ္မ​ဏီ​တည်ထောင်​ဖြစ်​တဲ့ အကြောင်း​အရင်း​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ။ ကျွန်တော်​ရယ်၊ စ​မိုင်းလ် …
BCC’s Music Concert in Perth (Soe Thu,Ni NI Khin Zaw,Mi Sandi )
Ko Soe Thu came for BCC’s Music Concert in Perth (Western Australia) with his Majesta Music Band. Please enjoy the video as you like. It takes 4hrs and 20 mins. Thankalot Ko Soe Thu and his group for your celebration on my anniversary of birthday (27th September 2014) …
ဆရာ​ချစ် ဖြေ​ခဲ့​တဲ့ အင်တာဗျူး (အသစ်)
phyo, Dec 2, 2014
Q – ဆရာ​ချစ် အရင်​တစ်​ခါ​လုပ်​သွား​တဲ့ ဂစ်​တာ​ပွဲတော်​ကို​ရော ထပ်​လုပ်​ဖို့ အစီ​အစဉ် ရှိ​ပါ​သေး​လား?? Sayar Chit – ပြောထား​တာ​တော့ ရှိ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​လို​မျိုး​ကတော့ လာ​မယ့်​ရှေ့​နှစ်​လောက်​မှာ လုပ်​ဖို့​ဖြစ်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ရှေ့​နှစ်​မှာ​တော့ ဖြစ်​အောင်​ကြိုးစား​မှာ​ပါ။ Q – အရင်​ပွဲ​မှာ ပရိသတ်​တုံ့​ပြန်​မှု​က​ရော ဘယ်​လို​ပြန်ကြား​ရ​ပါ​သလဲ?? Sayar Chit – ပရိသတ်​တုံ့​ပြန်​မှု​ကတော့ အခု​နောက်​ပိုင်း​မှာ ဂစ်​တာ​သမား​တွေ​ကို အားပေး​လာ​တာ တွေ့​ရ​တော့ ဂစ်​တာ​ပွဲတော်​မှာ ပရိသတ်​အားပေး​မှု​ကတော့ အထိုက်​အလျောက် ရှိ​ပါ​တယ်။ Q – ဆရာ​ချစ်​အနေ​နဲ့ ဂစ်​တာ​ပွဲတော်​ကို စ​လုပ်​တဲ့​အချိန်​မှာ ပရိသတ်​နဲ့ နည်း⁠နည်း​စိမ်း​နေ​မယ်​လို့ ထင်​ထား​လား?? Sayar Chit – ကျွန်တော် ပွဲ​စ​လုပ်​တဲ့​အချိန်​တုန်း​က​လည်း အဲ​ဒီ​လို​ပဲ တွေး​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ်။ …